I-Mullite cordierite ceramic sagger yebhethri ye-Sintered lithium
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Refractory Ceramic Sagger
Ubumba oluvutha umlilo oluyikhwalithi loMkhiqizi we-sagger | I-XTL
I-refractory cordierite ceramic sagger ye-sintering powder
Sizibandakanye ekuhlinzekeni ngebanga elibanzi le-Refractory Ceramic Sagger. Lezi Sagger Refractory Ceramic Sagger zitholakala ngezicaciso ezihlukahlukene ezihlangabezana nezidingo ezihlukahlukene zomkhakha wobunjiniyela.
I-saggar (ephinde engapelwanga kahle njenge-sagger noma i-segger) iwuhlobo lwefenisha yesiko.Kuyisitsha se-ceramic esinjengebhokisi esisetshenziswa ekushiseni izitsha zobumba ukuvala noma ukuvikela impahla eshiswa ngaphakathi kuhhani. Ngokwesiko, ama-saggar ayenziwa ikakhulukazi nge-fireclay.Ama-saggars aye asetshenziselwa ukuvikela, noma ukuvikela, impahla emalangabi avulekile, intuthu, amagesi kanye nemfucumfucu yomlilo.igama lingase libe isifinyezo segama elithi ukuvikela.Amasaga asasetshenziswa ekukhiqizeni izitsha zobumba ukuze zivikele impahla ekuthinteni amalangabi kanye nasekulimaleni kwemfucumfucu yaseziko.
Fire clay saggar Isetshenziselwa calcining zonke izinhlobo powder ekhethekile ezifana lithium ibhethri ternary materials ikakhulukazi 523,622, lithium cobalt oxides nezinye izinto ezifanayo. Enqubweni yokudubula, i-saggar ikhombisa izici zokumelana nokushisa okuphezulu, okungagxili, akukho ukusabela, impilo ende kanye nokumelana ne-alkali.
I-Sinter Lithium Battery Coathod Material
Fire clay saggar
Imishini yokubumba ezenzakalelayo
Amasheya amaningi, isikhathi sokulethwa cishe ngezinsuku ezingama-5-10. ngolwandle noma ngomoya njengesicelo sekhasimende
Ukulethwa ngesikhathi isikhathi ngasinye. Nikeza isevisi ethembekile futhi unesibopho sekhasimende ngalinye ngomkhiqizo ngamunye. Umgomo wethu uwukwanelisa wonke amakhasimende ngesevisi engcono kakhulu.
Ingamelana nokushaqeka okuphindaphindiwe kokushisa ukusuka ku-1350 degrees Celsius kuya ekamelweni lokushisa
I-Mullite ceramic iphinde isetshenziselwe amashalofu, ama-saggers kanye nama-props embonini ye-ceramic kanye ne-cordierite.Ngoba i-mullite inokuguqulwa okuphansi kwe-creep, ukumelana nokushaqeka okuhle okushisayo kanye nokumelana nokugqwala okuhle ngesikhathi sokudubula.
I-Ceramic sagger isetshenziselwa kakhulu ifenisha yesithando sokushisa okuphezulu kuma-ceramics ezimbonini, i-ceramics yesakhiwo, izinto zamakhemikhali kanye nezimboni zezinto ezibonakalayo.